ဂျပန်နိုင်ငံကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ Motor sports (Drift) - JAPO Japanese News
ဂါ 03 Sep 2019, 11:43 မနက်
ကားလမ်းတွေချော်တယ်ဆိုတာက ပုံမှန်ပဲလို့ထင်နေကြပေမယ့် အရမ်းကိုအန္တရာယ်များတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ထိန်းချုပ်ရင်း ချော်နေတဲ့အချိန်မှာ ထောင့်ကနေကွေ့တဲ့ Drift ဆွဲပြိုင်ပွဲဆိုတာရှိပါတယ်။
ကားစီယာတိုင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ accelerator၊ ဘရိတ်၊ hand brake ၊ ကလပ်စတာတွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့အသုံးပြုပြီး ဘေးတိုက်သွားတဲ့ပုံစံကို ထိန်းချုပ်ကြပါတယ်။
ပြောနေရတာ နားလည်ရခက်လို့ ဒီအောက်မှာပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့နော်။
Drift ဆွဲတာက တစ်ကွက်လောက်မှားသွားတာနဲ့ ယာဥ်မတော်တဆမှုကြီး ဖြစ်သွားနိုင်မလားမသိပါဘူး။ ဒါကို အပြည့်အဝထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာ ကား ၂ စီးက အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် ယှဥ်ပြီးတော့ ထောင့်တွေကို ကွေ့သွားတဲ့ပုံစံက တကယ်ကို အားကောင်းတယ်နော်။
သဲတွေထဲမှာမောင်းတဲ့ ပြိုင်ကားတွေက မြန်မြန်မောင်းဖို့အတွက် နည်းပညာတွေကို သုံးနိုင်ရင်တော့ ဒီလိုပုံစံမျိုးပါ။
ဒါကိုပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့တာက ဂျပန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
အသံကိုပါနားထောင်လိုက်ရင် ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်မလားလို့တောင် စိုးရိမ်နေမိတယ်နော်။
ဒါကတော့ ခုချိန်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကနှစ်သက်နေကြတဲ့ အားကစားတစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်လာပါပြီ။
ပြိုင်ပွဲတွေမှာ စတိုင်အမျိုးမျိုးရှိပေမယ့် ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ၂ စီးစီ ယှဥ်ပြိုင်ကြပါတယ်။
ရှေ့ရောက်နေတဲ့ကားအနေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် အံ့ဩရလောက်တဲ့ Drift ဆွဲနိုင်မယ်အချက်ကို ယှဥ်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သေချာပေါက် ရှေ့ရောက်ဖို့ဆိုတာက အလှည့်ကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်နဲ့လည်း Drift ဆွဲနေတာကိုလည်း ကြည့်လိုက်ပါဦး။
သေချာတာကတော့ ဒါတွေကို အများပြည်သူသွားလမ်းမှာ မလုပ်ဖို့အတွက်တားမြစ်ထားပါတယ်။
တကယ်တော့ ပြိုင်ကွင်းတွေမှာလည်း မောင်းလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိသလို မောင်းလို့မရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲကအတိုင်းဆိုရင် ကြမ်းပြင်မှာပွတ်ထားတဲ့အရာတွေ ကျန်နေမှာဖြစ်လို့ ပြိုင်ကွင်းတွေမှာ ခွင့်ပြုချက်သေချာယူလိုက်ပါနော်။
ဗီဒီယိုနဲ့ オノマトペ ကို သင်ယူကြရအောင်!
ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် စက်ရုပ်
Time management လုပ်နိုင်ခြင်းက အိပ်မက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်စေတယ်။ !!!!!